How'd it happen and more reports?: နိုင်ငံခြား ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုသတင်း အခြေအတင် ဆွေးနွေးခြင်း
ဆန်းသစ် | ကြာသပတေးနေ့၊ ဇွန်လ ၂၈ ရက် ၂၀၁၂ ခုနှစ် ၁၄ နာရီ ၂၂ မိနစ်
အသစ်ရေးဆွဲထားသော ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဆိုင်ရာ ဥပဒေသစ်အရ နိုင်ငံခြား ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသည့် ကုမ္ပဏီများနှင့် ဖက်စပ် ကုမ္ပဏီများသည် အခွန်ကင်းလွတ်ခွင့် ၅ နှစ်နှင့် ကုမ္ပဏီ တည်ထောင် လုပ်ကိုင်ခွင့် နှစ် ၇ဝ အထိ ခွင့်ပြုပေးမည်ဖြစ်သည်။ … စသဖြင့် ဗဟုသုတဖြစ်ဖွယ် လက်ရှိအခြေအနေများကို ဖေါ်ပြထားပါသည်။ သတင်း အခြေပြုရာ ‘မြန်မာ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု ထိပ်သီးအစည်းအဝေး’ တက်ရောက်လာကြသည့် နိုင်ငံခြားကုမ္ပဏီ နယ်ပယ်များကိုလည်း ဂရပ်ဖြင့်ဖေါ်ပြ ထားသည်။
“နိုင်ငံခြား ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဆိုင်ရာ ဥပဒေသစ်ကို မေလ ၂ ရက်နေ့တွင် ကျင်းပသွားသော လွှတ်တော် အစည်းအဝေးတွင် အတည်ပြုရန် စီစဉ်ထားသော်လည်း အချို့ လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ်များက ဥပဒေပါ အသေးစိတ် အချက်အလက် ကို ထပ်မံ ဆွေးနွေးလိုသောကြောင့် ဇွန်လိုင်လ ၄ ရက်နေ့တွင် ပြန်လည် စတင်မည့် လွှတ်တော် အစည်းအဝေးတွင်ဆွေးနွေးအတည်ပြုနိုင်ဖွယ် ရှိသည်။” ဟူ၍လည်း ရေးသားထားသည်ကို တွေ့ရသည်။
သို့သော် စာရေးသူ၏ အနောက်နိုင်ငံ (သူဌေးများ) မြန်မာနိုင်ငံသို့ အများဆုံး လာရောက်ကြမည် .. ဟူသော အချက်ကိုမြန်မာ့ရှေ့ပြေးယာဉ် ဗီယက်နမ်နိုင်ငံ ၁၈ နှစ်ကြာ ပြုပြင်ပြောင်းလဲမှု ခရီးဖြင့် နိုင်းယှဉ်၊ အခြေတင်ရေးလိုသည်။
FDI ဆိုတဲ့ နိုင်ငံခြား တိုက်ရိုက်ရင်းနှီးမြှပ်နှံမှုတဲ့ ဆိုလျှင် လူပြိန်းအတွေးအရ သူဌေးနိုင်ငံများသည် ဆင်းရဲတဲ့ နိုင်ငံများ သို့ လာရောက်ရင်းနှီးမြှပ်နှံသည်ဟု ထင်မိမည်။ မဟုတ်ပါချေ...။ ကမ္ဘာ့ထိပ်တန်း နိုင်ငံခြား ရင်းနှီးမြှပ်နှံမှု အများဆုံး ရသော နိုင်ငံသည် သူဌေးနိုင်ငံများပင် ဖြစ်ပါသည်။ အမေရိကန်သည် ထိပ်တန်းနေရာကို ယူထားပါသည်။ နိုင်ငံတနိုင်ငံ တွင် နိုင်ငံခြားရင်းနှီးမြုပ်နှံမှု မရှိရင် အဲဒီနိုင်ငံ အနာဂါတ်သည် မလွယ်တော့ဘူးလို့ ပြောရပါမည်။ ကမ္ဘာ့အချမ်းသာဆုံးဖြစ်သော အမေရိကန်ကို နိုင်ငံခြားမှ ကုမ္ပဏီများ လာရောက် အရင်းနှီးဆုံး ဖြစ်နေဆဲပါ။
ဝီကီ Wiki တွင် ကြည့်သည့်အခါ နိုင်ငံခြား ရင်းနှီးမြုပ်နှံမှု အများဆုံးရသည့် နံပါတ်အစဉ်လိုက် နိုင်ငံများမှာ အမေရိကန်၊ပြင်သစ်၊ အင်္ဂလိပ်၊ ဂျာမဏီ၊ ဟောင်ကောင် (တရုတ်ပြည်သို့ တိုက်ရိုက် မလာလိုသူများ ဟောင်ကောင်မှ တဆင့် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံ)၊ ဘယ်လဂျီယံ၊ နယ်သာလန်၊ စပိန်၊ တရုတ် .. စသည်တို့ ဖြစ်ပါသည်။ စင်္ကာပူသည် အဆင့် ၁၇ မှာရှိပြီး ဂျပန်က အဆင့် ၂၀၊ ထိုင်းနိုင်ငံ အဆင့် ၂၈၊ တောင်ကိုးရီးယား အဆင့် ၂၉၊ အင်ဒိုနီးရှား အဆင့် ၄၁၊ ဗီယက်နမ် အဆင့် ၄၃ အသီးသီး ရှိကြပါသည်။
နိုင်ငံခြားသားများ လာရောက် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံခြင်းဆိုသည်မှာ အမြက်အစွန်း ရလိုခြင်းအတွက်ပါ။ ဗီယက်နမ်၏ လုပ်အားခဈေးချိုခြင်း၊ Import & Export (သွင်းတာနဲ့ပို့တာ) မြန်ဆန် လျှင်မြန်ခြင်း၊ နိုင်ငံခြားသားများ နေထိုင်မှု အဆင်ပြေခြင်း များကြောင့် လာရောက်ကြသူ များသော်လည်း ခြုံကြည့်လျှင် အရှေ့တောင်အာရှနိုင်ငံများမှသာ လာရောက် ရင်းနှီးကြသည်ကို တွေ့ရပါသည်။
ဗီယက်နမ်နိုင်ငံ FDI လာရောက်ရင်းနှီးတဲ့ လုပ်ငန်းများတွင် Processing Industry ဆိုသော ကုန်ကြမ်းမှ၊ ကုန်ချောပြောင်းသည့် လုပ်ငန်းများတွင် အများဆုံး ရင်းနှီးကြပါသည်။ အလုပ်သမားခ ဈေးချိုခြင်းကြောင့်၊ အဆင့်နိမ့် အလုပ်သမား များစွာလိုသည့် ကုန်ထုတ်လုပ်ငန်းများစွာ လာရောက်လုပ်ကိုင်ကြပါသည်။
ဥပဒေ စိုးမိုးရန် အုပ်ချုပ်သူ ကိုယ်တိုင်က ဥပဒေအတိုင်း လိုက်နာ၊ နာခံတတ်သူ ဖြစ်ရပါမည်။ အစိုးရ လုပ်သူများ၏ဆွေမျိုးများက စီးပွားရေးသမား မဟုတ်လေ၊ ကောင်းလေ ဖြစ်သည်။ အခုခေတ်က စီးပွားရေးလုပ်မှ ၀င်ငွေကောင်းသောခေတ် မဟုတ်တော့ပါ။ လခစားလုပ်လျှင်လည်း စီအီးအို၊ ဒါရိုက်တာ၊ မန်နေဂျာများ အလွန် လစာကောင်းပါသည်။ လစာနဲ့ မှန်ကန်၊ သင့်မြက်စွာ လုပ်ကိုင်သူများ အစိုးရအဖွဲ့ထဲပါမှ ဥပဒေစိုးမိုးမည် ဖြစ်ပါသည်။ ရှင်းရှင်းပြောရလျှင် လာဘ်မစား၊ အာဏာအလွဲမသုံးတတ်သူများ အစိုးရလုပ်မှ ဥပဒေစိုးမိုးမည် ဖြစ်သည်။
ခရစ်ယာန်ကျမ်းစာ ဆုံးမချက်အရ မိမိ ရထားသော တရားဒေသနာများကို သိုလှောင်မထားဘဲ တိုးတက်များပြား၊ကြီးထွားစေရန် ခွက် ၅၀၊ ခွက် ၂၀၊ ခွက် ၁၀ ဥပမာပေးထားသည်။ ရရှိလာသောနိုင်ငံခြားငွေများကို တိုးပွားလာစေရန် မိမိကိုယ်တိုင် မလုပ်နိုင်ပါက လုပ်နိုင်သူများထံ ယုံကြည်အပ်နှံ၊ တိုးပွားစေရပါသည်။ ကျနော့်သားဖြစ်သူက အဖေ ဟာ ငွေရှာတော်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ငွေကို မသုံးတတ်ဘူး၊ တိုးပွားအောင် မလုပ်တတ်ဘူး (တနည်းပြောရရင်၊ ဖြုန်းပစ် တာများတယ်) လို့ ဆိုပါတယ်။ ရှာသမျှ ငွေတွေမှာ အိမ်ဝယ်ထားတာတခုပဲ တိုးပွားမှုရှိပါသည်။ ရလာတဲ့ ငွေကို တိုးပွားဖို့ နေနေသာသာ၊ မြေကြီးထဲ မြှုပ်ထားရင်လည်း ဆုတ်ယုတ်သကဲ့သို့ဖြစ်သည်။ ရွှေ ၀ယ်ထားကြသည်။ အိမ် ၀ယ်ထားကြသည်။ ကောင်းပါသည်။ အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းမှာ ကျမ်းစာပါ ဥပမာအတိုင်း တိုးပွားအောင် လုပ်နိုင်သူ များထံ အပ်ထားရပါမယ်။ ဘယ်သူမှ မယုံဘဲ၊ ဘဏ်ကိုပဲ ယုံရင်လျှင် ဘဏ်ပဲ အပ်တာပေါ့ဟု ရေးချင်ပါသည်။
ဥပမာ ပြောရလျှင် ယခုခေတ် ဂျာမဏီ၊ ဂျပန်၊ စင်္ကာပူ နိုင်ငံများကို နမူနာယူရပါမည်။ သူတို့နိုင်ငံများထံသို့ ၀င်လာ တဲ့ငွေကို တိုးပွားအောင်လုပ်နည်း သင်ယူရပါမည်။ နံပါတ်(၁)အချက်မှာ ပြည်သူတွေလက်ထဲ ရောက်လာသော လုပ်အားခငွေများကို အစိုးရက စုဆောင်းပေး ပါသည်။ စင်္ကာပူ CPF system, ဂျပန်၊ ဂျာမဏီ Retirement Fund များကဲ့သို့ မစုမနေရ စုဆောင်းစေပါသည်။ အမေရိကန်တွင် Social Security (လူမှုဖူလုံမှု)ပုံစံ ဖြစ်သည်။ ထို ရလာတဲ့ငွေကို အစိုးရက အမြက်စွန်းထွက်သည့် လုပ်ငန်းများတွင် ပြန်လည်ရင်းနှီးပြီး စီးပွားရေးသမား မဟုတ်သော အမျိုးသားရေး လုပ်သူ၊ ပညာတတ်များကို အုပ်ချုပ်စေပါ သည်။ လူရှာလို့မရလျှင် နိုင်ငံခြားမှ CEO လူတော်၊ လူကောင်းတွေ ကို လစာကောင်းကောင်းပေးပြီး အုပ်ချုပ်၊ စီမံခိုင်းပါသည်။ ပြီးတော့ မိမိနိုင်ငံသားများကို ချွေတာ သုံးစွဲရေး ပညာပေးရပါသည်။ မလွယ်ပါချေ။ လက်ရှိ အီးယူ ဥရောပသမဂ္ဂ အကြပ်အတည်း EU Crisis တွင် ဂရိနိုင်ငံမှပြည်သူများ မချွေတာချင်သောကြောင့် ဥရောပဘုံဈေးမှ အထုတ်ခံရမည့်အနေအထား ဖြစ်နေသည်မှာ နမူနာဖြစ်သည်။
မြန်မာလက်ရှိအခြေနေသည် ဗီယက်နမ်ကို မီဖို့ အများကြီးလိုသေးသော်လည်း အစိုးရအုပ်ချုပ်သူများ တကယ်ပဲ ပါတီစွဲ၊ လူမျိုးစွဲ၊ စစ်တပ်စွဲ မရှိဘဲ ညီညွတ်ကြမည်ဆိုရင် ခဏအတွင်း နိုင်ငံခြား ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုများ ဗီယက်နမ်ထက်ကျော်သွားနိုင်ပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ ပြည်ပတွင် လုပ်ကိုင်ထားသော ချွေးနှီးစာ စုဆောင်းမှုများကို မြန်မာပြည်သို့ FDI အဖြစ် လာရောက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံဖို့ အချိန်ကျပြီးလား? ပြည်သူများရဲ့ Attitude (သဘောထား)လည်း တကယ်ပဲ ပြောင်းလဲ တဲ့အခါ Dream GDP (မျှော်မှန် အမျိုးသားဝင်ငွေ)နဲ့ Nominal GDP per capital (သတ်မှတ် တဦးချင်းဝင်ငွေ) တို့လည်း တိုးတက်လာမှာ ဖြစ်ပါသည်။
Posted by Ko Nge at Tuesday, July 17, 2012